पारसपछि कसले गर्छ कप्तानी ? | Hamro Khelkud
पारसपछि कसले गर्छ कप्तानी ?
भूपेन्द्र जि.सी, काठमाडौं
सन् १९९६ बाट अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट यात्रामा पाइला टेकेको नेपाल हालसम्म टी–२० विश्वकप हुँदै एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय (ओडीआई) मान्यता सम्म आईपुगेको छ । नेपाली टोलीको अबको सपना एकदिवसिय विश्वकप हुँदै १०-१५ वर्षभित्र टेस्ट राष्ट्र बन्नु हो । जुन सपना कप्तान पारस खड्काले देखाएका छन् ।
पारस नेपाली क्रिकेटमा सर्वाधिक सफल कप्तान र खेलाडी हुन् । सन् २००९ देखी राष्ट्रिय टोलीको कप्तानी सम्हालेका पारसले थुप्रै बाधा-अवरोध र समस्यालाई पार लगाउँदै विश्वमा उदाहरणीय क्रिकेट देशको रुपमा नेपाललाई चिनाएका छन् । सन् २००९ मा विनोद दासपछि पारसले कप्तानको जिम्मेवारी पाएका थिए । उनले एसीसी टी २० एलिट कपमा मलेसियाविरुद्ध पहिलो खेल कप्तानी गरे । यो १० वर्षको अवधिमा डिभिजन ५ बाट सुरु भएको नेपालको यात्रा टेस्ट मान्यता प्राप्त गर्ने हैसियतसम्म पुगेको छ ।
तर कुनैपनि खेलाडी सदाबहार खेल्न सक्दैन र कप्तानमा पनि त्यहि लागु हुन्छ । उमेरसँगै मैदानमा प्रदर्शन पनि खस्किँदै जान्छ र आफ्नो मनले नचाहँदै पनि क्रिकेटबाट विश्राम लिनुपर्छ । पारस अहिले घरेलु क्रिकेटमा केहि कमजोर प्रदर्शन गरिरहेका छन् । तर उनको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भने प्रदर्शन गजबको छ । त्यसैले नेपाली क्रिकेटले अहिले नै उनको विकल्प खोज्ने बेला भएको छैन । पारस आफैंले पनि बेला-बेलामा आफ्नो भविष्यबारे उचित समयमा निर्णय लिने बताउँदै आएका छन् । अहिलेको समय पारसको विकल्प खोज्ने समय हैन र अहिले नै त्यसको जरुरत पनि छैन । ३१ वर्षिय पारस आफ्नो क्रिकेट करियरको बीचमा छन्, उनले यसै लयलाई कायम राखे कम्तिमा पनि अझै ३-४ वर्ष राष्ट्रिय टिमबाट खेल्ने निश्चित छ ।
गत सेप्टेम्बरमा एसिया कप छनोट क्यालिफायरमा निराश प्रर्दशन गरेर फर्केपछि पारसले भनेका थिए,’अर्को पटक हामी एसिया कप खेल्ने छौं तर मेरो कप्तानीमा होइन । अरु कसैको कप्तानीमा मलाई खेलाडीको रुपमा मात्र देख्नुहुनेछ” । यो भनाईबाट थाहा हुन्छ पारस अव धेरै लामो समय सम्म नेपाली टोलीको कप्तानी गर्ने छैनन् । यसै क्रममा पारसले अब आफू जस्तै सक्षम अर्थात कुशल कप्तान तयार पार्ने समय आएको छ । जस्मा विशेष गरेर पारसले युवा प्रतिभाशाली खेलाडीलाई प्रथामिकतामा राख्नुपर्छ । यो कार्य गर्न पारसले ढिला गर्नु हुँदैन ।
पारसले यस कार्यमा ध्यान नदिए उनको सन्न्यासपछि नेपाली क्रिकेट पुनर्निर्माणमा ठूलो धक्का लाग्ने छ । एक्कासी कप्तान सुम्पिदा टोलीको प्रर्दशनमा उथल पुथल आएको विश्व क्रिकेटमा थुप्रै उदारण छन् । जसमा वार्त्माना परिस्थितिको श्रीलंका र अष्ट्रेलियालाई लिन सकिन्छ । कुमार संगाकारा कप्तान हुँदा श्रीलंका विश्वको उत्कृष्ट राष्ट्रमा गनिन्थ्यो । हरेक प्रतियोगिता र श्रृंखलामा श्रीलंकालाई सधैं उपाधिको दावेदारको रुपमा हेरिन्थ्यो । तर, संगाकारको विश्रामपछि श्रीलंका क्रिकेट दिनप्रतीदिन ओरालो लागि रहेको छ । यहाँसम्म की सन् २०१४ को टी-२० विश्वकपको च्याम्पियन टिम चार वर्षपछि शीर्ष ८ मा पर्न नसक्दा विश्कप छनोट खेल्नु पर्ने भएको छ ।
श्रीलंकाले पछिल्लो एक वर्षमा ५ भन्दा बढि कप्तान परिवर्तन गर्दा पनि नतिजा निराशजनक आइरहेको छ । लगातार हारको कारण आफ्नै समर्थकले थुप्रै पटक मैदानमा विरोध पनि जनाएका छन् । त्यस्तै स्टिभ स्मिथ बल टेम्परिङ काण्डका कारण एक वर्ष प्रतिवन्धमा पर्दा अस्ट्रेलिया चार दशक यताकै खराब स्थितीमा छ । टेस्ट क्रिकेट होस् या सिमित ओभरको क्रिकेट नतिजा विपक्षीको पोल्टामा जाँदा एक समय विश्व क्रिकेटमा एकल दबदबा जमाएको अष्ट्रेलिया अहिले संकटमा छ ।
त्यसैले नयाँ कप्तान तयार गर्न पारसको लागि यो सबैभन्दा उत्तम समय हो । अबको समय पारसले सक्षम कप्तान तयार गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । दावेदारको रुपमा शरद भेषवाकर र ज्ञानेन्द्र मल्ल रहेपनि पारसले यी दुवैलाई छाडेर नयाँ युवा खेलाडीलाई तयार पार्नुपर्छ । पारस, शरद र मल्ल लगभग एक दुई वर्ष अन्तरालको उमेरमा मात्र फरक छन् । सम्रगमा एउटै उमेरका हुन् । यी तीन खेलाडीको सन्न्यासको अन्तराल पनि एक दुई वर्षको भन्दा फरक हुने छैन ।
अनि त्यसपछि कसले गर्छ कप्तानी ? त्यसैले पारसले शरद र मल्ललाई छाडेर आफ्नो सन्न्यासअघि प्रतिभाशाली कुशल र सक्षम कप्तान तयार पार्न चुनौती छ । जसले गर्दा नेपालले विश्व क्रिकेटमा अझ छिटो फड्को मार्नेछ । नेपालको टेस्ट राष्ट्र बन्ने बाटो पनि यसैमा अडेको छ । घरेलु, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रर्दशनलाई हेर्दा पारसपछि नपालको कप्तानी यी तीन खेलाडीले गर्न सक्छन् ।
ऐरीलाई अहिले देखीनै पारसपछि कप्तानको रुपमा हेरिएको छ । संभवत पारसले आफ्नो जिम्मेवारी पनि दिपेन्द्रलाई दिनेछन् । महेन्द्रसिंह धोनीले यू–१९ विश्वकप जिताएका विराट कोहलीलाई कप्तानको रुपमा तयार पार्दै उक्त जिम्मा दिँदा आज भारत विश्वको नम्बर वान टिम बनेको छ । युवा अलराउण्डर ऐरीले पछिल्लो दुई वर्षमा राष्ट्रिय तथा घरेलु टिमबाट निरन्तर राम्रो प्रर्दशन गरिरहेका छन् ।
तस्बिर : रमण सिवाकोटी
सन् २०१७ नोभेम्बरमा यू १९ एसिया कपमा भारतलाई १९ रनले हराउँदै पहिलो ऐतिहासिक जित निकाल्दा कप्तान ऐरीले ८८ रन र ४ विकेट लिएका थिए । त्यतिमात्र होइन यू–१९ विश्वकप र उमेर समुहमा सानदार प्रर्दशन गरि सकेका ऐरीले पछिल्लो एक वर्ष यता राष्ट्रिय टिमबाट लगातार राम्रो प्रर्दशन गर्दै आएका छन् । दिपेन्द्रको प्रर्दशनले शरद र ज्ञानेन्द प्रर्दशनपनि छाँयामा पर्न थालेको छ ।
नेपाललाई वान डे मान्यता दिलाउन ऐरीको महत्वपूर्ण योगदान छ । टिमको आवश्यकता अनुसार ब्याटिङ गर्ने उनले पार्टटाइम बलिङपनि गछन् । ऐरीले यू १९ मा सफल कप्तानको रुपमा निर्वाह गरि सकेका छन् । दिपेन्द्रले एभरेष्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) दोस्रो संकरणमा चितवन टाइगर्स र पोखरा प्रिमियर लिगमा(पीपीएल) मा एक्सपर्ट धनगढीबाट कप्तानी गरिसकेका छन् ।
प्रदर्शनको आधारमा पनि फ्रेन्चाइज लिघरुमा सर्वाधिक रन बनाउने शीर्ष ५ भित्र नेपालबाट एक मात्र खेलाडीको रुपमा दिपेन्द्रको नाम छ । ऐरीले ३ वान डे, १ टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय र १८ लिष्ट ए को अनुभव बटुलिसकेका छन् । सूरुवाती ३ वान डे खेलमा नेपालबाट सर्वाधिक रन बनाउने सूचिको शीर्षस्थानमा ऐरीको नाम छ । त्यसैले धेरैले दिपेन्द्रमा पारसको छाँया देखेका छन् । पारसपछि कप्तानको रुपमा दिपेन्द्रलाई पहिलो रोजाईमा हेरिएको छ ।
तीव्र गतिका बलिङ अलराउण्डर सोमपाल कामी पारसपछि कप्तान गर्न सक्ने ठूलो सम्भावना बोकेका युवा खेलाडी हुन् । अलराउण्डर सोमपालले तीन चर्चित घरेलु लिग ईपीएल, डीपीएल र पीपीएलमा सफल कप्तानको भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन् । सोमपालकै कप्तानीमा दोस्रो सकंरणको डीपीएलको उपाधि धनगढी टिम चौराहले जितेको थियो ।
सोमपाल कामी (फाइल तस्बिर)
राष्ट्रिय टिममा पनि सोमपालले उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्दै आएका छन् । पछिल्लो ४ वर्ष यता निरन्तर राष्ट्रिय टिमबाट खेलिरहेका सोमपालले टोली र फ्यानलाई निराश बनाएका छैनन् । नेपाललाई टी–२० विश्वकप देखी पहिलो ओडीलाई जिताउन सम्म उनको प्रर्दशन महत्वपूर्ण छ । सोमपालले १२ टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय, ३ वान डे(ओडीआई) र ४० लिष्ट ए खेली सकेका छन् । टी– २० क्रिकेटमा १० औं नम्बरमा आएर ४० रन बनाउने सोमपालको विश्व कीर्तिमान समेत छ । सोमपाललाई पनि पारसपछि नेपाली टोलीको कुशल नेतृत्व गर्न सक्ने ठूलो सम्भावना बोकेको खेलाडीको रुपमा हेरिएको छ ।
आरिफ शेखले हालसम्म कुनै प्रतियोगितामा कप्तानी गरेका छैनन् । तर यू–१९ विश्वकमा उप-कप्तानको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । पछिल्लो एक वर्षमा आरिफ राष्ट्रिय टिमबाट मिडिल अडरमा पहिलो रोजाईमा पर्दै आएका भरपर्दा युवा खेलाडी हुन् । परिस्थीति अनुसार खेल्ने आरिफले थुप्रै पटक हारको संकट टारेका छन् । साथै ओडीआई मान्यता प्राप्त गर्न उनको प्रर्दशन निकै महत्वपूर्ण रहेको छ ।
ब्याटिङमा नेपालबाट ठूलो संभावनाको रुपमा हेरिएको आरिफले मिडियम पेश बलिङ पनि गर्ने क्षमता राख्दछन् । आरिफले ३ वान डे, १ टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय र २० लिष्ट ए को अनुभव बटुली सकेका छन् । आफ्नो मेहनतलाई अझै बढाउँदै लगे साथै आगमी दिनमा घरेलु लिगको कप्तानको जिम्मा दिए पारसको सन्न्याससम्म आरिफ कुशल कप्तानको रुपमा तयार हुन सक्छन् ।